Umlingo waseKenya wamaQhawe oKhenketho amatsha e-WTM eLondon nguNethiwekhi woKhenketho weHlabathi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Awards » Umlingo waseKenya wamaQhawe oKhenketho amatsha e-WTM eLondon nguNethiwekhi woKhenketho weHlabathi
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zeManyano • Awards • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba zase-USA ezaphulayo • I-WTN
IiMbasa zamaQhawe oKhenketho
Kuthatha ntoni ukuba liQhawe lezoKhenketho? I-World Tourism Network ikukhanyisele namhlanje koku kwaye yaqaphela abanye babo baye bahamba umgama owongezelelweyo ukugcina ukhenketho luqhuba ubhubhani we-COVID-19.
Namhlanje, i-1 kaNovemba, yayivulo lwe-World Travel Market eLondon kwiziko leMiboniso ye-Excel.
Ibikokokuqala amalungu eWorld Tourism Network edibana buqu emva kwamakhulu eentlanganiso zoomza ngexesha le-COVID-19.
Le ikwalusuku amanye amaQhawe oKhenketho awongwa yiWorld Tourism Network adibana eLondon eWTN ukufumana iziqinisekiso zawo zamawonga.
“Kukho amakhulu amawaka amaQhawe oKhenketho,” utshilo uSihlalo weWorld Tourism Network, uJuergen Steinmetz, namhlanje, “ekuwongeni onke loo magorha agcine ishishini lethu lokuhamba kunye nokhenketho lidlula kwi-COVID-19. Sibabiza ngokuba ngamaqhawe angaziwa. Bakho kuyo yonke indawo. Ezinye zazo siyazibona, siyazi ngazo, kwaye sinokuziqonda. Yile nto siyenzayo namhlanje.”
I-World Tourism Network (WTN) yasekwa ngoDisemba 2020, emva kweenyanga ezili-9 ze ukwakha kwakhona iingxoxo zaququzelelwa nguJuergen Steinmetz, umpapashi we eTurboNews.
Ingxoxo yokwakhiwa kwakhona yokuhamba yaqala ecaleni kwe-ITB Berlin erhoxisiweyo ngoMatshi ka-2020 kunye nePATA, iBhodi yezoKhenketho yaseNepal, eTurboNews, kunye neBhodi yezoKhenketho yaseAfrika.
Namhlanje, i-WTN inamalungu kwicandelo likarhulumente okanye labucala lokhenketho kumazwe ali-128.
Kunyaka ophelileyo, iWTN yaseka i IHolo yaMazwe ngaMazwe yezoKhenketho. Oku yayikukuqaphela abo bahambe inyathelo elongezelelweyo lokukhokela eli shishini kwintlekele ye-COVID-19.
Ifoto nguChristian del Rosario weCDR Galleries
Amaqhawe amane okuqala awongwa ngawo Obekekileyo. Najib Balala, unobhala wezoKhenketho eKenya; Obekekileyo. Edmund Bartlett, uMphathiswa wezoKhenketho eJamaica; UGqirha Taleb Rifai, owayesakuba nguNobhala Jikelele we-UNWTO; yaye UTom Jenkins, i-CEO ye-ETOA.
Namhlanje, amaqhawe adibana okokuqala kwaye abanjwe nguMagical Kenya kwi-World Travel Market eLondon.
Yayilusuku olukhethekileyo kubahlobo bomntu kunye nabatsha bokusondeza ukudibana ngokobuqu. Uninzi lwabazileyo kwi-WTM kunye namalungu e-WTN avela, exhawula izandla okokuqala. Yayilixesha elichukumisayo kwabanye.
Izatifikethi zanikwa amaqhawe oKhenketho akhoyo namhlanje okanye amelwe, kubandakanywa UMichel Nahon waseFransi, UAleksandra Gardasevic waseMontenegro, UNjingalwazi Geoffrey Lipman yeSunX eBelgium, kunye uAgnes Muchuha waseKenya.
Amaqhawe amabini amatsha anebhongo amkelwa namhlanje eWTM.
Yayilusuku lokuqala njenge-CEO entsha yeBarbados Tourism UJens Thraenhart. Wayehlaliswe nguHloniphekileyo. UMphathiswa wezoKhenketho waseBarbados, uMhlonishwa. ULisa Cummins, kunye nentloko yoKhenketho lwaseBarbados. Ikwayimini awayemelwe ngayo ngeMbasa yeQhawe ngempumelelo yakhe emangalisayo, kuquka nexesha lakhe njengoSihlalo weMekong Tourism Organisation athe wayishiya kwinyanga ephelileyo.
Igorha elitsha lesibini eliwongwe namhlanje UDov Kalmann, uSirayeli. Wayelilungu lokuqala lengxoxo ye-rebuilding.travel kwaye waba negalelo kwintlanganiso yokuqala yombutho eBerlin, eJamani, ngoMatshi 2020. U-Dov umele iGunya lezoKhenketho laseThailand kwaSirayeli.
Umamkeli-ndwendwe, oHloniphekileyo. Najib Balala, ubulele iWorld Tourism Network kunye noJuergen Steinmetz ngendima edlalwe ngulo mbutho kunye noJuergen ekubuyiseleni ukhenketho.
Oku kubethelelene noHloniphekileyo. U-Edmund Bartlett waseJamaica, okwangumntu osemva kwengxoxo yokunyamezela ukhenketho kwiCaribbean.
Amaqhawe oKhenketho anokonyulwa ngaphandle kweendleko www.
Ulwazi oluthe vetshe ngeWorld Tourism Network: www.wtn.travel